Dumarka soomaaliyeed: Marti koydaa iyo ma koy ninaa 30 keen galaanjo fadaane! | Jubbaland Media Online
Dumarka soomaaliyeed: Marti koydaa iyo ma koy ninaa 30 keen galaanjo fadaane!
Posted on October 11, 2016 in Feat, Wararka // 0 Comments
Galaanjaha ama fandhaalka waa geed la qoray oo sida qaadada raashinka lagu cuno, siiba Soorta. Beeraleyda soomaaliyeed waa dad aad u jecel cunidda soorta. Sida sheeko aan masdarkeeda la hubin igu soo gartay, maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa reer beeraley ah u timid marti, markaasaa nin 12 fandhaal oo soor ah maalin walba cuni jiray lagu yiri “Ow-hebel maanta martibaa timid, 12 ki Fandhaal surta gal ma aha, markaasuu yiri ” Marti ha timaado amase yayna imanin, aniga waxaan rabaa 12-ki Fandhaal.
Hadal haynta ugu badan saaxada siyaasadda soomaalida beryahan dambe waxay noqotay dumarka soomaaliyeed oo dalbanaya 30% in laga siiyo awooda xukunka dalka. Waxaa arinkan ka hadlay islamarkaana dhaliilay qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed oo ku tilmaamay qorshe ay dabada ka riixayaan quwado shisheeye.
“Qoondada dumarku waa qorshe ay gaaladu wadato, horudhacna u ah dhalan-rogga bulshada iyo burburinta qoyska. Waxay carqalad ku tahay in la helo doorasho xalaal ah, waxayna qofka ka xayuubineysaa xorriyadda codkiisa, waana jajuub iyo amar ku taagleyn qaawan” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen culimada.
Haweenka soomaaliyeed ayaa dhankooda ku dooday in ay xaq u leeyihiin in ay wax doortaan lana doorto, sidoo kale in qoondada 30-ka ah ay la mid yahay 4.5, xalna loo arkay inta laga gaarayo doorashooyin xalaal ah. Waxa kalooy ku doodeen in marki ay arkeen dhibaatooyinka dalka ka jirta ay go’aansadeen in ay ka qeyb-qaataan dib u dhiska iyo nabadeynta dalka.
Culimada doodooda waxay ku saleeyeen in qoondada dumarka aanay waafaqsaneyn shareecada Islaamka, sidoo kale dimuqraadiyadda, sidaas darteedna ay ka soo horjeedaan, laakiin dhanka kale waxaa lala wada socdaa inaysan maanta Soomaliya ka jirin dowlad shareecada Islaamka amaba dimuqraadiyad wax ku xukunta! sharciga dalka lugu xukumana uu yahay 4.5, siiba marxaladda hadda lagu jiro. Sidoo kale cidda xilka loo biibayo waa cid xoogsi iyo laaluush ku timid, amaba uu soo xulay oday dhaqameed ceeb u arka in gabar beeshiisa matasho. Disaas darteed dooda gabdhaha Somaaliyeed waxay daaran tahay mar hadii horay loo yiri 4.5 waa xal, xalaalna ma aha, hade anagana soddonkeenu waa xal, inta laga gaarayo doorashooyin xalaal ah, oo ka madaxbanaan oday-dhaqameed aaminsan in matalaada gabadha meel ka dhac ku tahay beesha “?
Hadaan qodobkaas xasaasiga ah halkaas ku dhaafno, bal aan wax yar ka taabanno ka qeybgalka dumarka xukunka guud ahaan caalamka.
Dumarka qabanaya jagooyinka sare oo sii kordhaya
Inkasta oo ka qeyb galka dumarka xukunka dunidan casriga ah uu aad u hooseeyo marka la bar-bar dhigo ragga , qiyaas ahaanna ilaa 20 dal oo keliya ay ka hayaan xilal sare ( madaxweyne ama raiisul-wasaare), sidoo kale 20% baarlamaanada dunida, hadana dhanka kale guud ahaan dunida waxaa laga dareemayaa kor u kac xawaaro dheer ku socda dumarka xilalka sare qabanaya. Tirada guud mushrraxiinta xilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay sanadkan waxay ahayd 13 musharrax. 7 ka mid ah waxay ahaayeen dumar, inkastoo laga dul booday lana doortay Antonio Guterres (Ra’isal-wasaare hore, dalka Portugal. (Taking office 1 January 2017). Laakiin hadana waxuu arinkan muujinayaa hanqaltaaga dumarka xukun-doonka ah heerka uu marayo.
Daraasaad la sameeyay sanadki hore 2015 matalaada dumarka guud ahaan baarlamaanada dunida waxay gaartay 21.8%. halka sanadkii 1995 ay ka ahayd 11.3% oo keliya.
10 ka dal ee ugu horeya matalada haweenka waxay noqdeen dalalkan soo socda:
8.South Africa 42.3%
10.Iceland 10 39.7%
Waxaa jirta dood marba-marka ka dambeeysa sii xoogeysaneysa in dumarka ragga uga haboon yihiin meela badan oo maamulka ah, siiba arimaha qoyska,caruurta, caafimadka, waayeelka iyo guud ahaan arimaha bulshada. Waxaa kaloo la sheegayaa in musuqqoodu aad u yar yahay marka la barbar dhigo ragga oo mar keliya wax weyn hambada. Xattaa hadii ay dhacdo in gabadha wax musuqdo, inta badan dhaqaalahaas waxuu dib ugu laabanayaa dalka guduhiisa, sida ehelo, qaraabo IWM, halka ragga isku koobo amaba dibadaha u daabusho dhaqaalaha dalka, daarana ka jeexdo dalal shisheeye. Si gaar ah dumarka soomaaliyeed waxaa intaa u dheer inaysan lahayn balwad, taasoo Alle looga mahadiyo, halka ragga soomaaliyeed uu dilooday jaad/qaad iyo sigaar. Waa dood macquul ah hadii lagu doodo sababta keentay in dalkeena burburo, welibana burburka daba dheeraado waxaa qeyb ka ah daroogadaas ku badan ragga soomaaliyeed, siiba siyaasiyiinta”.
Dumar badan oo ka xikmad badan ragga qaar ayaa jira. Hadaan soo xigano qisada Quraanka kariimka qaadaa dhigay ee boqoraddi la oran jiray Balqiisa ee reer Saba. Waxay ahayd boqorad awood badan oo hadana xikmad badan, qoomkeeda u horseeday caaqibo la mahadiyay. Marki uu Nabi Suleymaan nabad gelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee fariinta u soo diray, waxay qaadatay go’aano cajiib ah. Waxay isugu yeertay raggi wasiirada u ahaa waxay tiri: Fariin wanaagsan ayaa Suleymaan ka timid, aniga ma ihi mid go’aan gaarta wada tashi la’aan, talo keena!
Waxay ku yiraahdeen, waxaan nahay dagaal yahanno awood badan, go’aankana adaa leh, waxaad doonto na amar. (Yacini waan is difaaceynaa, cagta ayaan marineynaa ciddii nagu soo xad gudubta). Balqiisa warkaas kama daadagin waxayna raggi u sheegtay in dagaal uuna faaiido lahayn, waxayna go’aansatay inay xeeladeysi iyo diblumaasiyad kula dhaqanto nabi Suleymaan, waxayna tiri: Waxaan u dirayaa wafdi hadiyad sida, waxaanan eegayaa waxa ay la soo nogdaan”.
Qisada way dheertahay laakiin waxaan uga danleenahay oo keliya, sideedaba marka uu rabi inooga sheekeynayo qisooyin hore ogow xikmad ayaa ku duugan la doonayo in lagu cibraqaato, Hadii kale Alle inoogamaba sheekeeyeen.
Balqiisa waxay ahayd hogaamiye dumar ah, qoomkeedana u horseeday wanaag. Hadii ay qaadan lahayd taladi ay siiyeen raggi la-taliyayaasheeda ahaa waxaa dhici lahayd in ciidamadii faraha badnaa ee Rabbi u leyliyay Nani Suleymaan, kana koobnaa jinka, insiga, shimbiraha, dabeylaha IWM mar keliya lagu soo kiciyo, dakun-daakunna laga dhigo.
Rag iyo dumarba waa mas’uul
“Dhammaantiin waxad tihiin masuul, masuul walbana waxaa la weydiinayaan howsha loo diray” Halkaas laguma kala soocin dumar iyo rag. Aadam iyo Xawaa waajibaad iyo mas’uuliyad-baa la dul dhigay markii lagu lahaa “janada ka cuna meesha aad doontaan, hana u dhawaanina Geedkan” Amarkaa la duldhigay waxuu ahaa masuuliyad culus oo la wada saaray Aadam iyo Xawaa, marki Sheeydaanka sambariirixyayna si isku mid ah ayaa loo ciqaabay, waana laga towbad aqbalay.
Hooyadeen Khadiija bahweyntii Nabiga CSW waxay ahayd ganacsato masuul ka ah hanti badan. Sidoo kale waxaan la wada soconaa Hoyadeen Umu Salama RC iyo dowrkeedi ku aadanaa dowladda Islaamka, waxaana tusaale loo soo qaadan karaa dowrki ay ku lahayd heshiiskii Xudeybiya ee Nabigu CSW la galay gaaladi Qureesh. Maalinkaas Muslimiin badan ayaa ka gows’adeegay qaar ka mid ah shruudaha heshiiska, hase ahaatee si arinkaas loo xaliyo nabiga CSW waxuu qaatay ra’yiga Umu Salama RC oo ahayd haweeney caqli iyo garasho Alle ugu deeqay. Rag la’aan ma ahaynin Nabiga CSW marki uu qaadanayay ra’yiga Umu Salama, waxaana hareerihiisa taagnaa rag badan. Masuuliyad ka weyn miya jirta in la taliye loo noqdo nabi Maxamed Csw.
Ummunaa Caisha RC. Nabiga csw ka sokow waxay ahayd masdarka culuumta diinta laga qaato, waxayna saxaabada weliba kuwooda waaweyn weydiin jireen masaaisha culculus oo ay ka jaahil bixin jirtay.
قال أبو موسى الأشعري: «مَا أُشكلَ عَلَيْنَا أَصْحَاب رَسُوْل الْلَّه حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ، إلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.
Mar hadii la yiri: “barashada diinta waa waajib saaran wiil kasta iyo gabar kastoo muslim ah, maxaa diidaya in saxaabada culuumta diinta ka qaataan Caaisha RC, Mas’uuliyad ka weyn miyaase jirta in bare ama macalin la noqdo, sidoo kale in Nabi Maxamed CSW xoghayn loo noqdo?.
Dumarka Soomaaliyeed ha digtoodeen
Shakki kuma jiro in dumarka Soomaaliyeed kaalin mug leh ka qaadan karaan dib u dhiska qaranka, laakiin hadana dhanka kale waxaa jira arima kaloo mudan in maanka lagu hayo, siiba dumarka Soomaliyeed:
Waxaa jira dulmi laba-dhabanle ah oo haysta guud ahaan gabdhaha dunida Islaamka. Mar waxay la daalaa-dhacayaan dhaqanno iyo caadaad jaahigi ka haray oo mararka qaar dulmi loogu geysto, sida in daryeelka iyo wax barashada wiilka xooga la saaro, gabadhana aan sidaas loo daryeelin.
Dulmiga labaad waxaa lagu ibtileeyay isu ekeysiinta gabdhaha gaalada, siiba reer galbeedka oo ay moodayaan inay wax badan dheer yihiin. Iyada oo laga faaideysanayo dareenkaas is liiditaanka ah ee ay muujinayaan gabdhaha muslimaadka ah ayaa lagu soo duulay sharaftooda, waxaana la doonayaa in sharafta laga qaado. Ciiwaanka dhagartaas waa “xuquuqda dumarka” Ragga iyo gabdhaha soomaaliyeed wax mashaakil ah kama dhexeeyo, gabdhaha soomaaliyeedna waa kuwa ugu subcadda wanaagsan bulshada Soomaaliyeed, climadana si doo kale. Erayga “Xuquuqda dumarka laftirkiisa ayaaba loo arki karaa faquuq iyo yasitaan, gabdhaha la yasayo, hadaanay ahayn waxaa la maqli lahaa :xuquuqda ragga”
Dabka iyaga ka dhex shidan maadaama aysan lahayn diin iyo akhlaaq ayay doonayaan inay bulshadeena ka dhex-huriyaan. Mar dhow waxaa la arki doonaa iyagoo wata boor ay ku qoran tahay ” Xuquuqda dumarka jinsigooda bedelay, ama ragga iska dhigay -“ IWM
Isku soo wada xoori, gabdhaha soomaaliyeed waa inaysan noqonin wadda halaqmareen ah oo looga soo xaluusho diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeed, hana ka qeyb qaateen dhismaha dalka iyagoon hoos gelin tabeelaha beenta ah (Xuquuqda dumarka)
Hadaan qodobkaas xasaasiga ah halkaas ku dhaafno, bal hadana aan ku soo gunaanadno 30 ka mid ah dumarka jagooyinka sare ka haya caalamka, amaba soo qabtay sanadihii ugu dambeeyay.
Dumarkii ugu horeeyay ee xilal sare qabta;
1.Sukhbaataryn Yanjmaa, oo u dhalatay dalka Mongolia, waa haweeyneydi gu horeysay (taariikhda dhow) ee madaxweyne ka noqota dal, (ku meel gaar) (1953-1954).
2.Isabel Martinez de Peron, waa haweeneydi ugu horeysay dunida ee qabata xil madaxweyne aan ku meel gaar ahayn, dalka Argenntin, (1974-1976).
3. Sirimavo Bandaranaike, oo u dhalatay dalka Sri Lanka, waa haweeneydi ugu horeysay ee raiisul-wasaare ka noqota dal (saddex jeer ayay raiisul-wasaare noqotay: 1960–65, 1970–77 iyo 1994–2000).
4.Vigdis Finnbogadottir, waa haweeneydi ugu horeysay ee afar jeer oo xiriir ah loo doorto madaxweyne dal, weliba doorasho toos ah (1980-1996).
5.Benazir Bhutto, waa haweeneydi ugu horeysay ee raiisul-wasaare ka noqota dal Muslim ah (Pakistan), waxayna xilkan qabatay laba jeer, (2 December 1988 – 6 August 1990 iyo 19 October 1993 – 5 November 1996) Waxaa kaloy qabatay xilal kala duwan.
Dumarka xilal sare haya ama horay soo qabtay:
6. Fowsiyo Yusuf Haji Adan, wasiirkii hore ee arimaha dibadda Soomaaliya, waxay ahayd haweneydi ugu horeysay ee jaga heerkaa ah ka qabata dalka Soomaaliya. ( 4 November 2012-17 January 2014).
7.Sucaad Axmed Faarax, madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka madaxtooyada DDSI.
8. Aamina Maxamed Jibriil, wasiirka arimaha dibadda Kenya. Waxay horay u soo qabatay xilal kale oo heer qaran iyo heer calami ah, sida, wakiilka joogtada ah ee Kenya u fadhiya xafiiska Qaramada Midoobay ee Geneva,(2000–2006). Kaaliyaha xoghayaha guud ahna ku xigeenka agaasimaha fulinta barnaamijka deegaanka Qaramada Midoobay (13 May 2011 – 20 May 2013).
9. Ellen Johnson Sirleaf, madaxweynaha dalka Liberia. (from 2006 ilaa xilligan la joogo )
10. Catherine Samba-Panza, waxay ahayd madaxweyne ku meel gaar ah, Jamhuuriyadda Bartamaha Africa (23 January 2014 – 30 March 2016). Waxay horay u ahayd duqa magaalada caasimadda Bangui (14 June 2013 – 23 January 2014).
11. Rose Francine Rogombé, madaxweyne ku meel gaar ah, dalka Gabon (10 June 2009 – 16 October 2009).
12. Sylvie Kinigi, raiisul-wasaare hore dalka Burundi (27 October 1993 – 5 February 1994).
13. Joyce Hilda Banda, madaxweyne hore dalka Malawi (2014)
14.Ivy Matsepe-Casaburri, waxay mar noqotay ku sime madaxweyne dalka South Africa, (24 September 2008 – 25 September 2008, waa siyaasiyad caan ah oo xilal muhiim ah ka soo qabatay dalkaas, wasiirka warfaafin (June 1999 – 6 April 2009 ) gudoomiyaha gobolka Free State (18 December 1996 – 15 June 1999)
15. Dilma Rousseff, Madaxweynihii hire ee dalka Barazil (1 January 2011 – 31 August 2016).
16. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, madaxweynihii hore ee dalka Argentina (10 december 2007-10 decsember 2015).
17. Megawati Sukarnoputri, madaxweynihii hore ee dalka Indonesia sanadihii 2001 -2004.
18. Theresa May, rasiisul-wasaaraha cusub ee dalka Britain (Jun 2016- ).
19. Angela Merkel, waa haweyneyda xukunta dalka Germany, uguna awooda badan madaxda qaaradda Yurub. (2005- ).
20.Erna Solberg, waa raiisul wasaaraha dalka Norway, waxaa xafiiska timid 16 October 2013.
21.Hillary Clinton,waa 69 jir u sharaxan jagada madaxweynaha dalka Mareykanka oo ah dalka ugu awooda iyo dhaqaalaha badan dunida, hadii la doortana waxay noqon doontaa haweeneydi ugu horeysay ee madax ka noqota dalka Mareykanka.
22.Irina Bokova, waa madaxa The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO (15 October 2009 ilaa imika)
23.Gloria Arroyo, madaxweyne hore, dalka Filipin (January 20, 2001 – June 30, 2010)
24. Julia Gillard, waa ra’iisul wasaarahii hore ee dalka Australia. (2013).
25.Virginia Raggi, waa mayor-ka ama duqa magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga.
26.Kim Campbell, raiisul-wasaare hore, dalka Canada (June 25, 1993 – November 4, 1993)
27.Tansu Çiller, raiisul wasaare hore, dalka Turkey (25 June 1993 – 6 March 1996)
28.Indira Gandhi, Raiisul wasaare hore, dalka India (24 January 1966 – 24 March 1977 iyo 14 January 1980 – 31 October 1984)
29.Soong Ching-ling, madaxweynihii hore ee dalka China (16 May 1981 – 28 May 1981)
30. Janet Yalin waa haweeney Mareykan ah oo madax ka ah guddiga loo yaqaano the Federal Reserve system, amaba hadii si kala loo dhaho central banking system of the United States. Haweeneydan guud ahaan dunida waxay ku leedahay saameyn ballaaran doolarka dartii.
30 kursi ha nala siiyo!
Waxaa qoray Bishar Haji. Wixii talo iyo tusaalo ah kala xiriir cinwaankan: